Malunga nathi-Quanzhou Stamgon Trading Co, Ltd.
IQuanzhou Stamgon Trading Co Ltd. ebesenza ishishini ngeelaphu ukusukela1993. Iimveliso zethu zibandakanya iifutshane zaselwandle, iimpahla zokunxiba kunye ne-Yoga yokunxiba etc. Iimarike zethu eziphambili zikumazwe ase-Yuropu, North America, South Pacific kunye ne-Southeast Asia. Sineefektri ezisixhenxe zokudibaniselana ezinabasebenzi abangaphezu kwe-2300 abanobuchule. Iziphumo zethu zemveliso zifikelela kwizigidi ezingamashumi amabini eedola zaseMelika ngonyaka.
Sinexesha elide sibambisene ngokusondeleyo nabaxhamli abanjengoZara, iK-marike, njl... Sibamkela ngokunyaniseka abahlobo bethu abavela kwihlabathi liphela ukuba batyelele umzi-mveliso wethu baxoxe nathi ngeshishini. "Ngokuphathelele kubathengi abaninzi njengeyona nto ibaluleke kakhulu, ukunika eyona nkonzo kubathengi" yinto yethu. Siya kuhlala sifumana intsebenziswano yexesha elide kwaye sinethemba lokuba ngamaqabane abahamba nawe.
UMbukiso weMelbourne (07 / 11-09 / 11)
Umboniso weMilingo (4 / 2-7 / 2)
Umboniso we-ISPO (2 / 86-01 / 07)
Ukutyelelwa kwabaThengi eMelika
IQuanzhou Stamgon Trading Co, Ltd.